बराक ओबामा एप्पलको ईन्क्रिप्शनको बारेमा कुरा गर्छन् म म्याकबाट हुँ
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामा, दक्षिण द्वारा दक्षिण पश्चिम (SXSW) मा 'टेक्सास ट्रिब्यून' सम्पादक इवान स्मिथसँग कुरा गरेको छ, जहाँ उनले अप्रत्यक्ष रूपमा विवादलाई सम्बोधन गरे एप्पल संग एफबीआई। जे होस् ओबामाले भने कि उनीहरु दुबै बिच चलिरहेको ईन्क्रिप्शन लडाईका बारे विशेष रुपमा टिप्पणी गर्न सक्तैनन्, तर गोपनीयता र सुरक्षाका बृहत्तर मुद्दाहरुमा बोले। ओबामाले यसमा "निरंकुश" मत लिनेलाई चेतावनी दिए ईन्क्रिप्शन र भने कि अमेरिकी नागरिकहरूले छुट दिनु पर्छ सुरक्षा संग ब्यालेन्स गोपनीयता.
उनले पनि नोट गरे एयरपोर्ट सुरक्षा सुरक्षा र गोपनीयता बीचमा सम्झौताको एक उदाहरणको रूपमा। "सुरक्षामा जानु कुनै रमाईलो छैन," उनले भने, "तर हामीले जान्यौं कि यो महत्त्वपूर्ण छ।"
हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के यो छ कि टेक्नोलॉजिकली रूपमा यो एक अभेद्य उपकरण वा प्रणाली बनाउन सम्भव छ, जहाँ ईन्क्रिप्शन यति बलियो छ कि त्यहाँ कुनै कुञ्जी छैन, त्यहाँ पछाडिको ढोका छैन, कसरी बच्चा पोर्नोग्राफरलाई पक्रने? हामी कसरी आतंककारी योजना समाधान वा अवरोध गर्छौं? यदि सरकार भित्र पस्न सकेन, सबैजना आफ्नो जेबमा स्विस बैंक खाता लिएर हिडिरहेका छन्। त्यहाँ कुनै तरिकाले त्यो जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यकतालाई केही छुट दिनुपर्दछ। ईन्क्रिप्शन पक्षमा रहेका व्यक्तिहरू तर्क गर्छन् जुनसुकै सर्त भए पनि, यो सबै उपकरणहरूमा प्रयोग हुन सक्दछ। ती यी प्रणालीहरूको प्रकृति हो। त्यो प्राविधिक प्रश्न हो। म सफ्टवेयर इञ्जिनियर होइन। यो प्राविधिक रूपमा सत्य हो, तर यो अतिशयोक्तिपूर्ण गर्न सकिन्छ।
ओबामाले भने कि सरकारले यो सुनिश्चित गर्न चाहेको छ कि सरकारले बेवास्ता नगरी विश्वभरका आईफोनहरू छिर्न सक्दिन (चाहे त्यो चाहँदैन), त्यहाँ “सीमितताहरू छन् जुन हामी लागू गर्छौं” सुनिश्चित गर्नुहोस् कि हामी एक सुरक्षित र सभ्य समाजमा बस्छौं। उनले बीचमा सन्तुलन खोज्ने वकालत गरे ईन्क्रिप्शन र गोपनीयता, र सरकारले अपराध अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।
मेरो निष्कर्ष यो हो कि अहिलेको लागि तपाईंसँग यसमा निरंकुश दृष्टिकोण हुन सक्दैन। त्यसोभए यदि तपाईंको तर्क कूट ईन्क्रिप्शन हो भने यसले केही फरक पार्दैन, यसले हामी बसेको ब्यालेन्सको प्रकारलाई असर गर्दैन, जहाँ हामी हाम्रा फोनहरूलाई कुनै अन्य मानभन्दा माथि विचार गर्दछौं। त्यो सहि उत्तर हुन सक्दैन।
बराक ओबामा सोध्न आए सफ्टवेयर ईन्जिनियरहरू y प्रविधि कम्पनीहरु सरकारलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नुहोस्, र भने कि उहाँ ईन्क्रिप्शनमा समाधान चाहानुहुन्छ, यसको सख्त आवश्यकता हुनु अघि। उनले टेक समुदायलाई यस्तो स्थिति लिन चेतावनी दिए "सामान्य जनताका लागि टिकाउ छैन"किनकी यसले गतिरोध देखाउन सक्दछ जुन अन्ततः कानूनमा परिणत हुन्छ, र यसले राजनीतिक मौसम परिवर्तन गर्दछ केही टेप भए पछि।
एप्पल उनले यो प्रश्नमा पनि विचार राखेका छन, जहाँ उनी भन्छन कि यसमा समाधान गर्नुपर्दछ अमेरिकी कांग्रेस। को सट्टा अदालतहरू। राष्ट्रपति बराक ओबामाले यस्तो टिप्पणी गरे जसमा एप्पल संयुक्त राज्य सरकारको बिरूद्ध आम जनयुद्धमा आमने-सामने रहेका छन् कि एप्पलले गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा FBI लाई आईफोन अनलक गर्न मद्दत गर्नुहोस्, तपाईं यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ लिङ्क। थप रूपमा, तपाईंलाई यस आईफोन अनलक गर्न आग्रह गरिएको छ उपकरणमा पासवर्ड प्रतिबन्धहरू बाइपास गर्न नयाँ सफ्टवेयर सिर्जना गरेर।
एप्पलको विश्वास छ कि यस्तो मागको पालनाले उदाहरण बनाउनेछ peligroso जसले स्मार्टफोन र अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा एन्क्रिप्शनको सामान्य कमजोर बनाउन सक्छ। को अमेरिकी न्याय विभाग एप्पलको चिन्तालाई खारेज गरी यसको डरलाई "अतिशयोक्त" भनिरहेको छ र यस्तो अनुरोधले सर्त नराख्ने जग्गा दियो "मास्टर कुञ्जी"।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » बराक ओबामा एप्पलको ईन्क्रिप्शनको बारेमा कुरा गर्छन्
एप्पलले चीनमा नयाँ एप्पल स्टोर खोल्छ